၁၉၅၀ ခု ပတ်ဝန်းကျင်မတိုင်မီက လိုလိုလူမျိုးတို့ မိမိတို့ကိုယ်ကို သတ်မှတ်ခေါ်တွင်သော လူမျိုးစုအမည် လိုလို ကို တရုတ်ဘာသာဖြင့် နှိမ့်ချသည့်အနေဖြင့် ရေးသားခေါ်ဝေါ်သောအက္ခရာဖြင့် ရေးသားကြသည့်အတွက် ထိုအသုံးအနှုန်းကို တစ်ခါတစ်ရံရှောင်ရှားလေ့ရှိသည်။ ၁၉၆၆ မှ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ရောဘတ်ရှာဖာ က လိုလို-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများကို "ဘားမစ်"ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခဲ့သည်။ တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့် "မြန်-ယီ" ဟူ၍ သုံးနှုန်းပြီး ဗမာဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် "မြန်" နှင့် တိုင်မျိုးနွယ်စုတို့ကိုခေါဝေါ်သော အသုံးအနှုန်းများစွာရှိသည့်အနက်မှ "ယီ" ကိုယူ၍ ပေါင်းစပ်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၅၀ ခုနောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်အစိုးရမှ လိုလို ဟူသည့်အက္ခရာကို အခြားအသံတူသော နှိမ့်ချခေါ်ဝေါ်မှုမပါဝင်သည့်အက္ခရာဖြင့် အစားထိုးပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် "ယီ" အစား "လိုလို" စကားလုံးဖြင့် ပြန်လည်တွဲစပ်ခေါ်ဝေါ်စေခဲ့သည်။
Bradley, David (2012). "The Characteristics of the Burmic Family of Tibeto-Burman". Language and Linguistics 13 (1): 171_192.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိုလို-ဗမာနွယ်_ဘာသာစကားများ&oldid=539975" မှ ရယူရန်